Call Tracking သည်ကုမ္ပဏီများအား Analytics လေ့လာခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်
ဂူဂဲလ်မှသုတေသန ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသ ဖောက်သည်များ၏ 80% ကွန်ပြူတာ၊ စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်တွေရှိမရှိ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုလာကြည့်တဲ့သူတွေပေါ့ ဖုန်းခေါ်ခြင်းကိုပိုနှစ်သက်ပါ နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုအဖြစ်အီးမေးလ်သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းပုံစံတစ်ခုထက် အလားတူစွာစမတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူ ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းသည်နေ့စဉ်အင်တာနက် အသုံးပြု၍ ၉၄ ရာခိုင်နှုန်းသည်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုသုတေသနပြုလုပ်ရန်ပြုလုပ်ကြသည်။ သို့သော် ၂၈% သာနောက်ဆုံးတွင်တူညီသောစက်ဖြင့်ပင် ၀ ယ်ရန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြသည်။
ဒီဟာကစျေးကွက်သမားတွေအတွက်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ analytics အချက်အလက်များသည်မပြည့်စုံပါ။ ဦး ဆောင်မှုသည်၎င်းတို့ပြုလုပ်နေသည့်အွန်လိုင်းစျေးကွက်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းထက်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်ပါသည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဒေါ်လာအပေါ်အမြတ်အစွန်းတိုးမြှင့်ခြင်းကိုဖြေရှင်းရန်မှာဖောက်သည်များအနေဖြင့်သူတို့၏အရောင်းရဆုံးနေရာသို့ရောက်ရှိရန်ရောက်ရှိနေသည့်ဒစ်ဂျစ်တယ်လမ်းကြောင်းအတိအကျကိုထောက်ပြရန်ခေါ်ဆိုမှုကိုခြေရာခံခြင်း၌သာတည်ရှိနိုင်သည်။
ခေါ်ဆိုမှုခြေရာခံခြင်းအကောင်အထည်ဖော်ရန်နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။ ရိုးရှင်းသောနည်းတစ်နည်းမှာဖြစ်သည် ရည်ညွှန်းအရင်းအမြစ်အပေါ်အခြေခံပြီးဖုန်းနံပါတ်ပြောင်းလဲပါ စာမျက်နှာ၏။ ကျနော်တို့တကယ်လုပ်ဖို့ကျနော်တို့တီထွင် script ကိုတင်ခဲ့သည်။ စတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်သုံးစွဲသူများအားရှာဖွေမှုအတွက်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခု၊ လူမှုရေးအတွက်တစ်ခုနှင့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာများကိုရည်ညွှန်းရန်အတွက်တစ်ခုကိုသာအကြံပေးလိုသည်။ သို့မှသာသူတို့၏အားထုတ်မှုများကိုအမျိုးအစားအလိုက်စတင်တွက်ချက်နိုင်သည်။ အခြားနည်းလမ်းမှာပရော်ဖက်ရှင်နယ် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအားစာရင်းသွင်းခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အများစုမှာသင်၏သမားရိုးကျဖြစ်ရပ်များကိုအမှန်တကယ်မှတ်တမ်းတင်လိမ့်မည် analytics လျှောက်လွှာ။
Call-tracking ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ AdWords လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အခြားသူများအပါအ ၀ င်ရင်းမြစ်အမျိုးမျိုးမှသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းပြီးဖောက်သည်အလားအလာရှိသောလမ်းကြောင်းကိုခြေရာခံရန်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအချက်အလက်နှင့်ချိတ်ဆက်သည်။ ဤအချက်သည်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်စီးပွားရေးအကြောင်းသူတို့မည်သို့သိရှိကြောင်းအပါအဝင်ဖောက်သည်များ၏လူ ဦး ရေဆိုင်ရာနောက်ခံအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များစွာကိုပေးသည်။ ထိုကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူစျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့်ဒေါ်လာတစ်ထောင်လျှင်အမြတ်အစွန်းတိုးမြှင့်ခြင်းကိုခွင့်ပြုမည့်ပစ်မှတ်ထားသည့်စျေးကွက်သည်ကိတ်မုန့်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။
DialogTech များအတွက်ပေါင်းစည်းမှုနှင့်အတူတ ဦး တည်းထိုကဲ့သို့သောဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ် HubSpot, Google Analytics နှင့်အခြားပလက်ဖောင်းများစွာရှိသည်။ သူတို့မှာအတော်လေးအားကောင်းတဲ့ API ရှိတယ်။ စျေးကွက်ရှိအခြားကစားသမားများဖြစ်ကြသည် ဆင့်ခေါ်, Century Interactive မှ နှင့် LogMyCalls ။
အလားအလာတစ်ခုကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုခေါ်ဆိုသောအခါခေါ်ဆိုမှုခြေရာခံခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုသည်ရရှိနိုင်သည့်အချက်အလက်များကိုစုစည်းပေးသည်။ သူသည်လခပေးသောဒီဂျစ်တယ်ကြော်ငြာ၊ အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စာရင်းသို့မဟုတ်ဖေ့စ်ဘုတ်မှကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ခေါ်ဆိုခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ရရှိနိုင်သည့်အချက်အလက်များကိုစုစည်းထားသည်။ သူတို့ဟာရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ထဲကိုရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့သော့ချက်စာလုံးများ၊ ခေါ်ဆိုသူကဖုန်းလိုင်းလား၊ မိုဘိုင်းမှဖြစ်စေ၊ စသည်ဖြင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအသေးစိတ်လေ့လာပြီးအသေးစိတ်ရှာဖွေသည်။ အချို့သောအခြေအနေများတွင်ထိုအချက်အလက်များကို Analytics သို့ပင်ပို့ဆောင်သည်။ ထိုအချက်အလက်များသည်ရင်းနှီးမြှပ်နှံထားသည့်စျေးကွက်ပေါက်စျေးတစ်ခုစီ၏ထိရောက်မှုကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြပြီးသင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘတ်ဂျက်နှင့်မဟာဗျူဟာကိုသင့်လျော်စွာညှိနှိုင်းနိုင်သည်။
Century Interactive မှ
မေလ 23, 2012 မှာ 6: 21 pm တွင်
ဤသည်ခေါ်ဆိုမှုခြေရာကောက်ဘို့ကောင်းတဲ့အပိုင်းအစနှင့်ဆွဲဆောင်မှုအငြင်းအခုံဖြစ်ပါတယ်။ Century Interactive မှ, ငါတို့ would သဘောတူလိမ့်မယ်
ဖောက်သည် -“ ဒါဆိုမနေ့ကငါ့ကို AdWords ကနေတစ်ဆင့် click ၂၀ ကိုမောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါဖုန်းမမြည်ဘူး၊ ငါစီးပွားရေးမရှိဘူးဆိုတာငါသိတယ်။ အဘယ်ကြောင့်တဖန်ငါပြန်လာ ဦး မည်နည်း။
Marketer -“ ခဏစောင့်ပါ ဦး ။ ငါသည်သင်တို့ကိုကလစ်ကနေတချို့နွေးဆောင်လက်ခံရရှိသိ! ဟုတ်လား ငါမျှော်လင့်တယ်?"
“ ငါသည်သင်တို့ကိုကလစ် 20 အပ်နှင့်သူတို့သည်ဤသော့ချက်စာလုံးလေးခုမှလာကြ၏။ ထိုခလုတ် ၁၃ ခုမှဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့အနက် ၇ ခုသည်ရောင်းအားကြီးသည်။ ငါ့ကိုမယုံဘူးလား မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကိုအတူတကွနားထောင်ကြပါစို့၊ ကျွန်ုပ်ဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာကိုပြပါမယ်။ ”
မေလ 24, 2012 မှာ 12: 03 pm တွင်
Call tracking အကြောင်းကောင်းတဲ့ဘလော့ဂ်နဲ့တကယ်အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိတယ်။
သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုကလစ်တစ်ချက်မှတစ်ဆင့်တိုင်းတာပါ။ ၀ ဘ်ဆိုဒ်လည်ပတ်မှုများကိုသာတိုင်းတာသည့်အခါပျောက်နေသော link ရှိနေသည်ကိုသတိပြုပါ
၀ က်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့် through ည့်သည်လမ်းကိုမြင်နိုင်သည်
တစ်ခုချင်းစီကိုထူးခြားတဲ့ visit ည့်သည်များအတွက်ထူးခြားသောနံပါတ်
ဂူးဂဲလ်™ပေါင်းစည်းမှုသည်ခေါ်ဆိုမှုအချက်အလက်များကိုဂူဂယ်လ် Analytics ™သို့ပေါင်းစည်းနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုပေးပြီးကလစ်နှိပ်ခြင်းကိုခေါ်ဆိုမှုပမာဏနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။
install လုပ်ရန် hardware မရှိပါ။ အွန်လိုင်း login မှတဆင့် cloud အခြေခံသတင်းပို့စနစ် 24/7 ကိုသာဝင်ရောက်ပါ။
မေလ 25, 2012 မှာ 4: 46 pm တွင်
ဟုတ်ကဲ့, ခေါ်ဆိုမှုခြေရာခံခြင်းကျိန်းသေနေစဉ်တန်ဖိုးရှိပုံရသည်။ အွန်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ဆဲဖြစ်သောကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် ဦး ဆောင်မှုကို ဦး တည်စေသည်။